Warkiisu Wuu Cadyahay: Arsene Wenger Oo Ka Hadlay Mustaqbalkiisa Gunners, Halka Uu Sheegay Ozil Ama Sanchez In Uu Kooxda Midkood Heshiis U Saxiixi Doono – Kooxda.com
Home 2018 January Ingiriiska, Wararka Maanta Warkiisu Wuu Cadyahay: Arsene Wenger Oo Ka Hadlay Mustaqbalkiisa Gunners, Halka Uu Sheegay Ozil Ama Sanchez In Uu Kooxda Midkood Heshiis U Saxiixi Doono
Warkiisu Wuu Cadyahay: Arsene Wenger Oo Ka Hadlay Mustaqbalkiisa Gunners, Halka Uu Sheegay Ozil Ama Sanchez In Uu Kooxda Midkood Heshiis U Saxiixi Doono
Tababaraha Kooxda Arsenal ayaa kala cadeeyay mustaqbalkiisa kooxda Arsenal xilli ay jiraan warar sheegaya in uu kooxda ka tagi karo hor inta uuna heshiiksiisu dhamaan.
Arsene Wenger ayaa ku adkeysanaya inuusan qorsheyneynin inuu ka tago Arsenal xagaagaan, waxaana uu sii joogi doonaa ilaa iyo 2019.
Mustaqbalka Wenger ayuu mugdi ku jiraa xilli ay jiraan warar sheegaa in Carlo Ancelotti shaqada ka badali doono xilli sidoo kale kooxdu marayso dib u dhis weyn maadama ay xiddigaha Alexis Sanchez iyo Mesut Ozil 6 bilood kadib si xor ah uga tagi doonaan kooxda.
Tababaraha Gunners ayaa qirtay in Alexis Sanchez la iibin doono bishan maadama uu diiday in uu heshiis cusub u saxiixo laakiin ay ku rajo weyn yihiin in uu Ozil heshiis cusub u saxiixo kooxda isaga iyo waliba xiddiga Jack Wilshere.
Tababaraha Arsenal oo arintaas ka hadlaya ayaa yiri”Waxa aan mustaqbalka u hibeeyay Arsenal, waxana aan halkan joogay 21 sano”
“Sidaa darteed go,aan kasta oo aan qaato waxa uu u fiican yahay kooxda,hadii aan joogo hal sano oo kale ama 10 sano dhab ahaan waa isku mid”.
“Aniga ayaa muumule ka ah halkan ma jirto cid kale, waxa kaliya ee aad qaban karto ayaa ah wixii kooxdaada u fiican, waana waxa aad isku daydo in aad qabato, taasna lama xiriirto xaaladayda gaarka ah”.
Miyaad sii hogaamin doontaa kooxda xilli ciyaareedka dambe? “heshiiskayga ayaa cadaynaya arintaas.
Miyaan ka tagayaa isaga oo aan dhamaan? “Maya, maxaan isku badalayaa”.
“Waxa ay u muuqataa in uuna Sanchez heshiiskiisa kooxda u kordhin doono laakiin waxa aanu sii haysan doonaan Jack iyo Ozil hadii ay jirto fursad”ayuu hadalkiisa sii raaciyay.